Cote D'Ivoire and African Tourism Board share a Golden Vision | African Tourism Board News
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Cote D'Ivoire sy ny Birao Afrikana fizahan-tany dia mizara fahitana volamena
Cote D'Ivoire sy ny Birao Afrikana fizahan-tany dia mizara fahitana volamena
Ny tanjon'ny Birao fizahantany afrikanina dia ny hamerenany endrika indray ny fizahan-tany ho an'i Afrika miray hina ary hanoratra tantara vaovao ho an'ny kaontinanta afrikanina amin'ny alàlan'ny fizahan-tany aorian'ny COVID-19. Manaiky ny mpitondra any Ivory Coast ary miantso azy io hoe ny Golden Vision.
Ny federasiona nasionalin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny Ivory Coast dia manatevin-daharana amin'ny fomba ofisialy ny Birao fizahantany afrikanina, fomba fanao afrikanina tokana ihany no hahasoa ny kaontinanta.
Ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany dia manendry ny masoivohon'izy ireo ao Cote D'Ivoire
Ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina Cuthbert Ncube dia niresaka fomba iray handrosoana amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Mother Africa lasa COVID-19 ary mahita sandry malalaka.
Tao anatin'ny sehatry ny fifampiraharahana nifanaovany tamin'ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany Ivoariana dia nihaona androany tamin'ny National Federation of Hospitality Hospital of Cote d-Ivoire ny filohan'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany (ATB) Andriamatoa Cuthbert. Nizara ny fahitan'ny ATB momba ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatry ny fizahantany ao Cote d'Ivoire izy.
I Cote d'Ivoire irery no firenena mitarika ao amin'ny Vondrona Ekonomika sy vola any Afrika Andrefana, ny 45% amin'ny harinkarena faobe ao amin'ny Vondrona voalaza fa firenena 8. Manasongadina ny fahefana ara-toekarena misolo tena ny firenena ao amin'io faritra io.
Ny fivoriana dia natrehan'ny filohan'ny FNIH-CI, Andriamatoa LOLO Diby Cleophas miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy akaiky, ary Andriamatoa Joseph GRAH, masoivoho ATB vaovao ao Cote d'Ivoire.
Nandritra ny fihaonana dia nisaotra ny mpanatrika ny Filohan'ny ATB tamin'ny fandraisana azy ireo tamim-pitiavana.
Natolony ny vinan'ny ATB izay hamerenana ny lisitra ny fizahan-tany ary hanoratra tantara vaovao amin'ny kaontinanta afrikana manoloana ny toe-piainana manerantany,
Ny tanjona dia ny hamerenana an'i Afrika ho toerana fizahan-tany tsara indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny valanaretina COVID19.
"Africa dia tanindrazan'ny zanak'olombelona", hoy i Ncube.
Noho izany ny tanjon'ny fitsidihany tany Cote d'Ivoire dia ny fanentanana ireo mpiray antoka Ivoariana mba hifanome tanana sy hanohana izany fahitana volamena .
Nilaza i Ncube .: Tsy maintsy hijoro ho iray i Afrika hahatratrarana io fahitana volamena io. Ny tena ilaina indrindra dia ny manaparitaka ny fetra sy ny toe-tsaina hitazomana ny Afrikana hiankina amin'ny politikan'ny tandrefana ary hisorohana izany mba hahatratrarany ny tanjon'izy ireo manokana. ”
Ny talen'ny FNIH-CI Andriamatoa LOLO Diby Cleophas dia naneho fatratra ny fankasitrahany an'Andriamatoa Cuthbert Ncube tamin'ny fahafoizan-tena natao tamin'ity diany ity tany Cote d'Ivoire na eo aza ny loza ateraky ny fivontosana COVID19.
Nino koa izy fa io dia fotoana iray ahafahan'ny mpisehatra fizahantany miverina mieritreritra ny sehatry ny fizahantany ary mamerina azy io eo ambany fiahian'ny fikambanana toa ny ATB izay toa nanjary mpitondra matanjaka.
Andriamatoa Cuthbert dia tompon'andraikitra malaza teo aloha ao amin'ny UNWTO noho ny fandaharanasa niaraka taminy. Sekretera jeneralin'ny UNWTO ny talen'ny fikambanana Dr Taleb Rifai.
Mandritra izany fotoana izany, nanasongadina ireo fanamby lehibe atrehin'ireo fizahantany any Afrika ny fihaonana. Tafiditra ao ny sidina lafo vidy, tsy fisian'ny sidina mampifandray mivantana eo amin'ny firenena afrikanina, fizahan-tany anatiny sy fitsaboana tsy dia mandroso izay mety hitondra fanjakana lehibe. Ncube sy Cleophas dia nanaiky ihany koa ny tsy fisian'ny politikam-pizahantany mifangaro sy mifamatotra izay tokony hitantana ny fizahantany any Afrika.
Amin'izany fanamarihana izany, ny talen'ny ATB dia nanao antso ho an'ny Federasiona Nasionalin'ny Indostrian'ny fandraisam-bahiny an'ny Cote d-Ivoire hanatevin-daharana ny tolona miaraka amin'ny ATB hahazoana fandresena lehibe sy ny famirapiratan'i Afrika ho tanindrazana iraisana.
Farany tamin'ny anaran'ny mpiara-miasa aminy, ny filoha Andriamatoa LOLO Diby Cleophas dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana ny fikambanany FNIH-CI ho mpikambana ao amin'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina ary nampanantena ny hifandray amin'ny Masoivoho ATB Andriamatoa Joseph GRAH hampandroso bebe kokoa ny fifandraisana.
Ivory Coast dia nanaiky ny paikady fampandehanana mba hampiroboroboana tsara kokoa ny fizahantany mifanaraka amin'ny vina sy ny torolàlana ATB.
Nisy sary nalaina tamin'ny faran'ny fivoriana mba tsy hahafaty ny fitsidihan'ny filohan'ny ATB tao amin'ny birao.